मनोरञ्जन – NepalNewsTime
‘नेपाल आइडल २’को अडिसन आजबाट
नेपाल आइडलको दोस्रो सिजनको अडिसन आज बाट सुरु हुँदै छ । भैरहवाको अंचलपुरस्थित (नेपाल आयल निगमको अगाडी) जेसिज किन्डर गार्डेन हाई स्कूलको प्राङ्गणमा नेपाल आइडलको अडिसन दोस्रो सिजनको पहिलो अडिसन भएको हो । नेपाल आइडलको दोस्रो सिजनको अडिसन भैरहवामा अडिसन भएपछि क्रमश धनगढीमा चैत ११ गते, हेटौडाँमा बैशाख ३ गते, धरानमा बैशाख ८ गते, पोखरामा बैशाख […]
यस्तो बन्यो ‘नेपाल आइडल’ बुद्ध लामाको पहिलो गीत Video
नेपाल आइडल’ बुद्ध लामाको पहिलो गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘तिमी साथ भएपछि बोलको गीतको भिडियोमा पल शाह र आँचल शर्माको जोडीले मोडलिङ छ । अर्जुन अधिकारीको निर्देशनमा भिडियो यस्तो बनेको छ :
सन्तोष र विल्सनको ‘चौका दाउ’ घोषणा
चलचित्र ‘चौका दाउ’ निर्माणको घोषणा गरिएको छ । काठमाण्डौमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा पुणेन्द्रु झाले निर्देशन गर्न लागेको चलचित्रको घोषणा गरिएको हो । संगीतकार शम्भुजित बास्कोटाको यो चलचित्रमा कथा तथा संगीत छ । यो चलचित्रलाई शम्भुजितका छोरा सौर्यजीब बास्कोटाले निर्माण गर्दैछन् । चलचित्रमा सन्तोष पन्त, विल्सन विक्रम राई, रविन्द्र झा र तैयब शाहको मुख्य भूमिका […]
यी हुन् बलिउडका सबैभन्दा धनी हिरोइन्, कसको सम्पती कति ?
बलिउठ अभिनेत्री फिल्मबाट करोडौं रूपैंया लिन्छन, अनि विज्ञापन, शो आदीबाट पनि कमाउछन् । तपाईलाई सबै हिरोइन धनी छन्, भन्ने थाहा होला तर ती मध्ये सबैभन्दा धनी को छ ? भन्ने चाहिँ थाहा नहुन सक्छ । हेर्नुहोस् सूचीः सोनाक्षी सिन्हा पूर्व मिस इन्डिया पूनम सिन्हा र अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हाकी छोरी सोनाक्षी छोटो समयमा बलिउडमा राम्रो पहिचान […]
विवाहमा कति उमेर फरक राम्रो ?
अधिकांश पुरुष आफूभन्दा कम उमेरका लाई विवाह गर्न रुचाउछन् । भविष्यमा त्यही उमेर भिन्नताले यौन जीवनमा प्रभाव पार्न सक्छ भन्नेतर्फ भने कसैको ध्यान गएको पाइदैंन । चिकित्सकहरु विवाहका लागि बढीमा ५ वर्षसम्मको मात्र ग्याप राम्रो हुने बताउछन् । एकै उमेरमा विवाह गर्दा भावनात्मक सम्बन्ध र सोचाइ पनि मिल्ने भएकाले धेरै लामो अन्तरमा विवाह गर्नुहुँदैन । […]
कवड्डी’का घतलाग्दो पात्र, बिके । फिल्ममा उनी काजी (दयाहाङ राई)को बाइक-ड्राइभर हुन् । निमुखा छन्, तर रमाइलो पनि । बिकेले झेल्ने हविगत र बोल्ने संवादले दर्शकको मुड ‘रोमान्टिक’ बनाइराख्छ । काजीलाई उक्साउने, थमथमाउने, घुर्काउने बिकेको आवरणमा विजय बरालको अभिनय खास्सा छ । जतिबेला रामबाबु गुरुङ अनामनगरस्थित निर्माणाधिन मण्डला थिएटर अघिल्तिरको सानो कोठामा बसेर ‘कवड्डी’को स्क्रिप्ट […]
बियर किन खाने? हेर्नुहोस् यसका फाइदाहरु
Nepal News Time	March 5, 2018
बियर आनन्दका लागि सेवन गरिने पेय पदार्थ हो । बियर सेवनलाई नेपालमा अझै पनि राम्रो मानिँदैन् । यद्यपि बियरका कैयौं फाइदा पनि छन् । केही समयअघि गरिएको एक अध्ययनले बियरले शरीरमा औषधिजस्तै प्रभावकारी काम गर्ने देखाएको थियो । बेलायतको ग्रिनबीच विश्वविद्यालयले गरेको उक्त अध्ययनपछि बियर पिउँदा शरीरको पीडा कम हुने र यो पेनकिलरभन्दा पनि प्रभावकारी भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको […]
सलमान खानको नाममा ठगी गर्ने एक व्यक्ति पक्राउ
Nepal News Time	January 25, 2018
काठमाडौं, ११ माघ । बलिउड अभिनेता सलमान खानको नाममा ठगी गर्ने एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले राजु थापालाई पक्राउ गरेको हो । थापाले खानले सञ्चालन गरेको ‘बिइङ ह्युमन’ नामक संस्थाको फ्रेन्चाइजी मिलाइदिने भन्दै एक व्यक्तिलाई १५ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै महाशाखामा जाहेरी दर्ता भएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको […]
पद्‍मावत विरुद्ध प्रदर्शनपछि तनाव
भारतको विभिन्न राज्यमा हिन्दु अधिकारवादी समूहहरुले एक चलचित्रविरुद्ध प्रदर्शनहरु गरेका छन्। बिहीवार सार्वजनिक प्रदर्शन हुन लागेको विवादास्पद हिन्दी चलचित्र पद्‍मावतको विरोधमा ती प्रदर्शनहरु भएका छन्। गुजरातको अहमदाबाद शहरमा राति प्रदर्शनकारीहरुले दर्जनौं सवारीसाधन र सपिङ मलहरुमा क्षति पुर्‍याएपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो। ठप्प सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद हिन्दी चलचित्र पद्‍मावत प्रर्दशन गर्न अनुमति दिएपछि भारतको गुजरातमा प्रदर्शनकारीहरुले […]
सलमान खानको नाममा व्यापार गर्ने थापा ठगी आरोपमा पक्राउ
बलिउड अभिनेता सलमान खानले स्थापना गरेको परोपकारी संस्था ‘बिइङ ह्युमेन’को नेपाली प्रतिनिधि बनेर व्यापार गर्ने राजु थापा क्षेत्री पक्राउ परेका छन्। ठगी र चेक बाउन्सको आरोपमा महानगरीय अपराध महाशाखाले उनलाई बुधबार पक्राउ गरेको हो। खातामा पैसा नदिएको चेक दिएर ठगी गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको महाशाखाले जनाएको छ। उनले अन्य धेरै व्यक्तिलाई ठगी गरेको प्रहरी […]